Miaraka amin'ny traikefa niavosa ary manana mari-pamantarana ampy hanana fandraisana anjara bebe kokoa, fanohanana ary fiaraha-miasa ... kasaina hotanterahina ity Diabe Iraisam-pirenena faha-2 ho an'ny fandriam-pahalemana sy tsy ady amin'ny herisetra 2019-2020.
Ireo Mpanao fandresena (EP) izay hipoitra avy amin'ny hetsika sy tetikasa izay raisin'izy ireo avy amin'ny fototra sosialy, miaraka amin'ny fanahy izay "samy miahy izay tiany".
Any amin'ny firenena manana mponina ao amin'ny tanàna maromaro, ny firenena Promoter Team dia hiorina. Ao amin'ireny EPs ireny, toy ny fikambanana maro ahafahan'ny olona mandray anjara.
Ireo PE ireto dia omena ho fomba sy fomba fanao amin'ny asa, horizontalité, fiaraha-miombon'antoka ary fifanarahana mba handrindra ny hetsika.
La 2ªMM hanomboka Madrid el 2 Oktobra, 2019, Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana, folo taona taorian'ny 1ªMM. Hiala amin'ny lalana Afrika, Amerika Avaratra, Afovoany sy Atsimo, to jump to Oseania, mandehana Asia ary farany Eoropa mahatratra Madrid amin'ny 8 martsa 2020, Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Rehefa avy nitety ny planeta naharitra 159 andro. Tombanana ho 2ªMM Hanaraka ny firenena 100 izany ary mpikatroka an'aliny an'arivony no handray anjara amin'ity hetsika manerantany ity.